လူတှမေလြေ့ော့ခံဘဝရောကျရှိသှားပွီဖွဈတဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲ စူပါမငျးသားဒှေးရဲ့ ( ၅၆) နှဈပွညျ့မှေးနေ့ – Daily News
ပရိသတျကွီး‌ရေ …. ဒီကနဟေ့ာ နိုငျငံကြျော အကယျဒမီ ဒှေး ရဲ့ မှေးနေ့ လေး ဖွဈပါတယျ။ မိတျကပျတှေ ခွယျသမှုတှမေပါတဲ့ ပကတိ အကွမျးစား ရုပျသှငျ နဲ့ သဘာဝမငျးသား အဖွဈ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲကို အမိုကျစားသရုပျဆောငျခကျြတှေ ပေးတတျတဲ့ အနုပညာရှငျ ဖွဈတာ ကွောငျ့ ၉၀ခုနှဈ ပတျခြာလညျမှာ ပွိုငျဘကျမရှိတဲ့ စူပါတနျးဝငျမငျးသားတဈလကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒှေးကို အဖ ဦးတငျထှနျးမောငျနှငျ့ အမိ ဒျေါအေးအေးသငျးတို့ ရနျကုနျမွို့တှငျ မှေးဖှားပွီး မှေးခငျြးမြားအနကျ သားဦး ဖွဈသညျ။ အမညျရငျးမှာ ထငျလငျး (ခ) သားကွီး ဖွဈသညျ။ ထငျလငျး (ချေါ) ဒှေးသညျ Y.I.T မှ လြှပျစဈအငျဂြီနီယာဘှဲ့ရထားသူ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ လြှပျစဈအငျဂငျြနီယာတဈယောကျ ဖွဈသော ဒှေးသညျ ဘှဲ့မရခငျကတညျးက အနုပညာလောကထဲသို့ စတငျအခွခေခြဲ့သညျ။ သရုပျဆောငျလောကထဲသို့ မဝငျမီက အဆိုတျော ဖွဈခငျြခဲ့တာပါ ။ မမြှျောလငျ့ဘဲ ဦးလေးဖွဈသူသရုပျဆောငျ ဦးကြျောဟိနျးကွောငျ့ ရုပျရှငျရိုကျ ဖွဈခဲ့သညျ။ ရုပျရှငျလောကထဲသို့ နာမညျရငျး ထငျလငျးအမညျနှငျ့ ပထမဆုံး ဝငျရိုကျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးတှငျ ဒှေးအမညျသို့ပွောငျးကာ ၁၉၉၃ ခုနှဈတှငျ ဒါရိုကျတာ ကြျောဟိနျး၏ ဒုက်ခကို အရောငျဆိုးတယျ အမညျရှိ မူးယဈဆေးဝါးပညာပေး ဗီဒီယိုကားနှငျ့ ဝလေညျးမှေး၊ ကွှလေညျးမှေး ရုပျရှငျကားမှာ ပရိသတျအသိမြားပွီး စတငျအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
အကယျဒမီ ဒှေးသညျ နှလုံးရောဂါနှငျ့ ၂၀၀၇ခု၊ ဇူလိုငျ ၁၁ ရကျ (ဗုဒ်ဓဟူးနေ့) တှငျ ညနေ (၅) နာရီ၌၊အမှတျ (၃၄) (စီ)၊ အေးသာယာလမျး၊ ဘောကျထျော နအေိမျတှငျ ရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှားခဲ့လသေညျ။ ကှယျလှနျခြိနျတှငျ ဒှေးသညျ အသကျ (၄၂) နှဈရှိပွီ ဖွဈသညျ။ဇူလိုငျ ၁၃ရကျ မနကျ ၄နာရီ၌ နအေိမျတှငျ ပငျ့သံဃာတျော အရှငျသူမွတျမြားထံမှ သီလခံယူကာ ရစေကျခအြမြှဝခေဲ့သညျ။ ထို့နောကျ မနကျ ၅:၀၀ နာရီတှငျ ရဝေေးအအေးတိုကျ မှတဈဆငျ့ ရဝေေးသုဿနျတှငျ မီးသဂွိုဟျခဲ့သညျ။ ဒှေး၏အရိုးပွာကို ပွနျလညျသယျဆောငျကာ ခြောငျးဝဘုနျးကွီးကြောငျး၌ လှမျးစတေီတညျခဲ့သညျ။ကိုသားကွီး (ခ) ဒှေး၏ ပုံတူ ရုပျတုနှငျ့ သူရရှိခဲ့သော အကယျဒမီရှစေငျဆုကို သူဆောကျလုပျလှူဒါနျးခဲ့သော ခြောငျးဝဘုနျးကွီးကြောငျးရှိ အကယျဒမီကြောငျး၌ အမှတျတရထားရှိထားသညျ။မကှယျလှနျမီ နောကျဆုံးရိုကျလကျစ ကားမှာ ဒါရိုကျတာ ခြိုတူးဇျော ရိုကျသညျ့ ကမ်ဘာတဈခွမျးညဆိုသညျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ နှဈတှကွောခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒှေးရဲ့ ပီပွငျတဲ့ အနုပညာမှတျတိုငျတှေ ကတော့ ဆကျလကျရှိနဆေဲပါ ။
ကိုသားကွီးရဲ့ မှေးနလေ့ေး မှာ ကိုသားကွီးကို အမှတျတရ ရှိဆဲ ပရိသတျလေးတှကေ မှတျခကျြလေးတှပေေးခဲ့ကွပါဦး…။
ပရိသတ်ကြီး‌ရေ …. ဒီကနေ့ဟာ နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီ ဒွေး ရဲ့ မွေးနေ့ လေး ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်တွေ ခြယ်သမှုတွေမပါတဲ့ ပကတိ အကြမ်းစား ရုပ်သွင် နဲ့ သဘာဝမင်းသား အဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပေးတတ်တဲ့ အနုပညာရှင် ဖြစ်တာ ကြောင့် ၉၀ခုနှစ် ပတ်ချာလည်မှာ ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့ စူပါတန်းဝင်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒွေးကို အဖ ဦးတင်ထွန်းမောင်နှင့် အမိ ဒေါ်အေးအေးသင်းတို့ ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားပြီး မွေးချင်းများအနက် သားဦး ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ထင်လင်း (ခ) သားကြီး ဖြစ်သည်။ ထင်လင်း (ခေါ်) ဒွေးသည် Y.I.T မှ လျှပ်စစ်အင်ဂျီနီယာဘွဲ့ရထားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်သော ဒွေးသည် ဘွဲ့မရခင်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲသို့ စတင်အခြေချခဲ့သည်။ သရုပ်ဆောင်လောကထဲသို့ မဝင်မီက အဆိုတော် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ ။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဦးလေးဖြစ်သူသရုပ်ဆောင် ဦးကျော်ဟိန်းကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်လောကထဲသို့ နာမည်ရင်း ထင်လင်းအမည်နှင့် ပထမဆုံး ဝင်ရိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဒွေးအမည်သို့ပြောင်းကာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာ ကျော်ဟိန်း၏ ဒုက္ခကို အရောင်ဆိုးတယ် အမည်ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးပညာပေး ဗီဒီယိုကားနှင့် ဝေလည်းမွှေး၊ ကြွေလည်းမွှေး ရုပ်ရှင်ကားမှာ ပရိသတ်အသိများပြီး စတင်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
အကယ်ဒမီ ဒွေးသည် နှလုံးရောဂါနှင့် ၂၀၀၇ခု၊ ဇူလိုင် ၁၁ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် ညနေ (၅) နာရီ၌၊အမှတ် (၃၄) (စီ)၊ အေးသာယာလမ်း၊ ဘောက်ထော် နေအိမ်တွင် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဒွေးသည် အသက် (၄၂) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ဇူလိုင် ၁၃ရက် မနက် ၄နာရီ၌ နေအိမ်တွင် ပင့်သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များထံမှ သီလခံယူကာ ရေစက်ချအမျှဝေခဲ့သည်။ ထို့နောက် မနက် ၅:၀၀ နာရီတွင် ရေဝေးအအေးတိုက် မှတစ်ဆင့် ရေဝေးသုဿန်တွင် မီးသဂြိုဟ်ခဲ့သည်။ ဒွေး၏အရိုးပြာကို ပြန်လည်သယ်ဆောင်ကာ ချောင်းဝဘုန်းကြီးကျောင်း၌ လွမ်းစေတီတည်ခဲ့သည်။ကိုသားကြီး (ခ) ဒွေး၏ ပုံတူ ရုပ်တုနှင့် သူရရှိခဲ့သော အကယ်ဒမီရွှေစင်ဆုကို သူဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သော ချောင်းဝဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ အကယ်ဒမီကျောင်း၌ အမှတ်တရထားရှိထားသည်။မကွယ်လွန်မီ နောက်ဆုံးရိုက်လက်စ ကားမှာ ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော် ရိုက်သည့် ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းညဆိုသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တွေကြာခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒွေးရဲ့ ပီပြင်တဲ့ အနုပညာမှတ်တိုင်တွေ ကတော့ ဆက်လက်ရှိနေဆဲပါ ။
ကိုသားကြီးရဲ့ မွေးနေ့လေး မှာ ကိုသားကြီးကို အမှတ်တရ ရှိဆဲ ပရိသတ်လေးတွေက မှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါဦး…။